Inona no hatao rehefa tsy mandeha ny Apple Watch na tsy mandeha tsara | Vaovao IPhone
Ignatius Room | | Apple Watch, Fampianarana sy torolàlana
Ny Apple Watch dia fitaovana feno sensor ary miaraka amina teknolojia tena mandroso izay miasa amin'ny fomba milimetatra. Fa izy io dia fitaovana fanampiny ho an'ny iPhone, izay mamela antsika hanao asa samihafa izany raha tsy izany dia hanery anay hanala ny Apple Watch avy any am-paosintsika na kitapony. Fa amin'ny maha fitaovana anao dia mety hiaina olana amin'ny fahombiazana ianao. Ny ankamaroan'ny olana izay mety miseho amintsika isan'andro dia manana vahaolana mora, indrindra ireo izay mifandraika amin'ny mainty ny efijery Apple Watch. Avy amin'ny iPhone Actualidad dia hiezaka izahay hamaha ireo olana mahazatra indrindra mitranga amin'ny fampiasana Apple Watch.
1 Amboary ny olana amin'ny Apple Watch
1.1 Apple Watch dia manana efijery mainty
1.2 Apple Watch mampiseho efijery mainty fa maintso ny fotoana
1.3 Apple Watch dia mampiseho efijery mainty misy fotoana maitso ary sary famantarana ny varatra mena
1.4 Apple Watch dia miverina amin'ny efijery mainty ary mandre feo aho
1.5 Ny efijery sy ny bokotra Apple Watch dia tsy mamaly
1.6 Rehefa mandrehitra ny Apple Watch ianao dia tsy hihoatra ny paoma
Amboary ny olana amin'ny Apple Watch
Raha mahita olana tsy ao anaty lisitra ianao dia soraty ao anaty ny hevitra ary hanandrana manome vahaolana anao izahay.
Apple Watch dia manana efijery mainty
Raha mainty tanteraka ny écran Apple Watch ary tsy mamaly ny fifampiraharahana ny bokotra amin'ny Apple Watch dia azo inoana fa ny novonoina ny fitaovana na tsy ampy ny bateria mba hanehoana eo amin'ny efijery fa mila entina izy mba hiasa.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manindry ny bokotra amin'ny sisiny ary miandry raha hijery ny Apple Watch. Raha tsy izany dia azontsika atao ny mamerina azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra eo anilany sy ny kodiarana menio mandritra ny 10 segondra. Raha tsy mandeha io fomba io, ny bateria dia manana bateria maina tanteraka.
Apple Watch mampiseho efijery mainty fa maintso ny fotoana
Raha mampiseho ny efijery mainty ny fitaovanao, miaraka amin'ny fotoana maitso ary tsy mamaly ny bokotra rehetra hanolorana ny menio fampiharana na ny fidirana amin'ny fifandraisana, ny Apple Watch dia amin'ny maody fitsitsiana bateria.
Mety ho maody fitehirizana bateria mihetsika am-pahefana rehefa mahatratra 10% ny Apple Watch. Amin'izay fotoana izay dia mampiseho hafatra amintsika ny fitaovana mampahafantatra antsika fa hanome vola azy io na hampihetsika ny maody fitehirizana bateria. Amin'izay fotoana izay dia tsy hampiseho amintsika ny fotoana fotsiny ilay fitaovana, tsy hahajanona ny fifandraisana amin'ny finday amin'ilay fitaovana, ka lasa famataran-tànana lafo vidy.
Apple Watch dia mampiseho efijery mainty misy fotoana maitso ary sary famantarana ny varatra mena
Raha asehon'ny fitaovantsika amintsika ny efijery mainty mampiseho ny ora sy ny kisary misy taratra mena ao anatiny, toy ny tamin'ny tranga teo aloha, dia ao ny Apple Watch fomba fitehirizana bateria. Amin'ity fomba ity, very ny fifandraisana rehetra amin'ny iPhone, ka tsy afaka mijery ny ora fotsiny isika.
Ao amin'ity maody fanangonana batterie ity dia kely dia kely ny fanjifana ny famantaranandro, saingy misy fotoana tonga tsy maintsy entintsika izy io ary amin'izay fotoana izay no hiseho ilay sary famantarana mena misy helatra ao anatiny. Raha te hivoaka amin'ny fomba fitehirizana bateria ianao dia tsy maintsy mamerina ilay fitaovana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra an-daniny sy ny bokotra kodia mandritra ny 10 segondra mandra-pahatongan'ny Apple logo.
Apple Watch dia miverina amin'ny efijery mainty ary mandre feo aho
Raha maty ny efijery an'ny Apple Watch antsika fa mandre feo avy ao isika, milamina, tsy adala isika, tsotra navotsotra ny safidin'ny fidirana amin'ny Voice Over. Raha te-hamono azy io dia tsy maintsy mandeha amin'ny fampiharana Apple Watch isika na tsindrio ny kodiarana ary angataho i Siri hamono azy.
Ny efijery sy ny bokotra Apple Watch dia tsy mamaly
Raha mampiseho atiny ny fitaovantsika, dia mirehitra ny efijery, saingy tsy azontsika atao ny mamaly ny efijery na ny bokotra ara-batana, ny zavatra voalohany azontsika atao ny manamboatra azy io dia ny mamerina azy io. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manindry ny kodiarana sisiny miaraka amin'ny bokotra Apple Watch isika mandritra ny 10 segondra, mandra-pisehon'ny sary famantarana Apple Watch indray. Raha vantany vao nahitsinao ny Apple Watch ary na ny efijery ary ny bokotra dia mbola tsy mamaly, ny vahaolana tokana dia ny fitondrana ilay fitaovana mankany amin'ny Apple Store.
Rehefa mandrehitra ny Apple Watch ianao dia tsy hihoatra ny paoma
Raha manandrana mamadika ny Apple Watch isika, fa ny fitaovana tsy mandalo ny paoma na tsy mijanona amin'ny famerenana amin'ny laoniny, ny zavatra voalohany azontsika atao Ny fanandramana dia ny famerenana azy io amin'ny tanana, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kodiarana sy ny bokotra Apple Watch mandritra ny 10 segondra.
Raha mbola mandalo ny sakana ilay fitaovana, ny zavatra tsara indrindra dia ny mitondra azy any amin'ny Apple StoreSatria na inona na inona antony, angamba ny tsipika boot system dia miteraka olana. Mampalahelo fa tsy afaka mampifandray izany amin'ny Mac izahay ary mametraka indray ny firmware avy ao an-tranonay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Inona no tokony hatao rehefa tsy ho velona ny Apple Watch na tsy mandeha tsara
Amiko, fisie maro no tsy misokatra, manidy na mijanona anaty faribolana miandry ary avy eo dia tsy mitranga izany.
Ny ahy dia tsy miova ary efa naverin'ny orinasa indray aho intelo tao anatin'ny 3 volana. Tsy nisokatra ny Facebook Messenger nanomboka teo.
Toy izany koa no mitranga amiko ary na inona na inona angatahiko amin'i Apple, ny ataon'izy ireo dia ny manome tsiny ny mpamorona fampiharana. Mandefa atody.
ZotXs dia hoy izy:
Andramo esorina amin'ny iPhone izany ary avereno amin'ny alàlan'ny famantaranandro, ary aza mampiditra backup. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia manomboka hatrany am-boalohany ianao.
Valiny amin'ny ZotXs
Clockmaker TwoZero Point dia hoy izy:
Andao hatrehana izany, ny ankamaroan'ny fampiharana amin'ny fiambenana dia toa efa nalamina haingana sy ratsy (Ary fampiharana marobe izay mbola tsy novaina tamin'ny WatchOS 2). Na dia tsy hiteny aza isika fa haingana be ny famantaranandro, dia mandeha tsara ny fampiharana teratany voalamina tsara.
Ary mazava ho azy, raha mametraka ohatra iray hafa momba ny fampiharana tsy mandeha ianao dia angamba hahatsapa fangorahana bebe kokoa aho, saingy avy amin'ny Facebook ... Manohy ny fanoloran-tenany ho an'ny fandaharana amin'ny tranokalan'ny vavahadin-dry zareo ary mamela ny fandaharana fampiharana ho an'ny tena programmer, azafady 😉
Valio amin'ny Watchmaker DosPuntoZero
ZoltXs dia hoy izy:
Dospuntocero, mpanao mari-trano tsara, fa raha miverina aho dia nanandrana ny iPhone voalohany aho rehefa nivoaka ary saika tsy nanana magazay fangatahana dia naka telefaona finday izy ireo fa vaovao izy ireo, ny marina dia mbola mila mamintina betsaka ny Apple Watch ny Apple fa na izany aza ny watchOS 2 dia tena mahantra sy tsy milamina. rehefa mandeha ny fotoana dia tsy hiteny an'izany isika.
Valiny amin'ny ZoltXs
Xabier ihanyso dia hoy izy:
Salama daholo. Ny olan'ny Watch tsy mifandray amin'ireo rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo dia ny backup. Tsy misy ilaina ny mamerina indray ny famantaranandro, ny vahaolana tokana dia ny famerenana ny iPhone ho kopia vaovao. Tsy vahaolana tonga lafatra izy io, satria mandra-panavaozana ny watchOS dia hanohy ny olana amin'ny famataranay isika raha vantany vao manova ny kopia mandeha ho azy isika, saingy mandritra ny fotoana fohy dia voavaha izany
Valiny tamin'i Xabier Alonso
Webserveis dia hoy izy:
Raha te-ho zava-misy mihitsy, Apple no manome ny SDK miaraka amin'ireo API misy azy, raha toa ny fiasa amin'ny ampondra izy, tsy afaka manao zava-mahatalanjona ireo fampiharana.
Vokatra mbola tsy vita io, fantatr'i Apple ary ireo mpamorona ihany koa, ilay lasibatra dia ilay mpampiasa nividy azy. (Nampitandremana ianao, tsy tsara ny mividy ny kinova voalohany na inona na inona)
Valiny amin'ny Webserveis
Manana olana mitovy amin'izany aho ohatra: ny app Soundhound mandeha tsara, nametraka an'i Shazam aho ary tsy hisokatra ny app ary izany no tsy fisokafan'izy ireo nandritra ny taona maro!
Salama namana, nanana olana aho fa tsy nanjo ny paoma io ary taorian'ny fitsapana maro ny fomba tokana nahafahako nivoaka avy tao anatin'io loop io dia ny fampiharana iPhone watch amin'ny fizarana voalohany Apple Watch miditra ianao ary esory ny Apple Watch anao avy amin'ny iPhone dia manandrana mamandrika ianao ary manomboka amin'ny alàlan'ny fanindriana ny satroboninahitra sy ny bokotra herinaratra miaraka amin'izay mandra-pisehoan'ny paoma.
Manantena aho fa izany dia nanompo ahy, na dia manana olana amin'ny fantsom-batterie aza aho.
Manana ny famantaranandro iPhone aho rehefa nesorina, na izany aza dia nifandray tamin'ny batery tontolo alina izy ary mafana ny famantaranandro fa tsy mandeha izy, inona no azoko atao?
Toy izany koa no mitranga amiko
Mamaly an'i Edwin
Manana olana amin'ny messenger aho, rehefa manokatra azy aho dia mikatona hatrany amin'ny famoahana (eo amin'ny faribolana miandry) avy eo tsy manao zavatra hafa izy, inona no azoko atao?
Maria Vega dia hoy izy:
Izaho dia teo amin'ny masoandro niaraka tamin'ny Apple Watch ary rehefa te hahita ny fotoana tsy niasa intsony aho! Maty izy! Izaho dia efa nametraka azy ary mbola tsy mandeha izy, tsy mamaly na inona na inona. Misy olona afaka manampy ahy ve. Tsy te hiteny amin'ny dadako aho.
Valiny tamin'i Maria Vega
Jonathan Vila Arissa dia hoy izy:
Hatramin'ny omaly rehefa mihodina ny tanako aho dia tsy mandeha izany
Valiny tamin'i Jonatan Vila Arissa
Salama. Ny famantaranandroko paoma dia mandany ny bateria tampoka ao anatin'ny ora firaketana, adiny telo latsaka. Tsy mampiasa fampiharana. Ary koa, isaky ny mandeha mainty aho ary te hampiasa azy dia tsy maintsy miditra amin'ny kaody famohana aho. Nisy olon-kafa nitranga ve ?? MISAOTRA
Salama, manana fangatahana aho omaly alina nijery ny efijenon'ny famantaranandroko paoma tsy fantatro izay notsindriako ary niseho ny efijery iray izay nilaza fa hamafana ny zava-drehetra amin'ny mena noezahiko hiala fa tsy afaka aho ary toy ny finday ilay izy tapaka ary mitohy ilay efijery mitovy.
harrynews dia hoy izy:
Miarahaba ahy fa misy tarehin-javatra misy amin'ny famantaranandroko paoma, nafana ny andro ary napetrako teo amin'ny efijery ilay mari-pamantarana tafahoatra, ary rehefa tsy misy sarany ary tsy mandeha izy io, rehefa mampifandray azy vao mametraka ny tariby amin'ilay ampahany maitso izay mameno fa tsy mandeha na inona na inona
Mamaly amin'ny harllenews
jhoan Manuel dia hoy izy:
Mipoitra ny paoma dia mampifandray ny charger aho ary maneno izany fa tsy mandeha izy tsy haiko hoe ny tariby na ny famantaranandro
Mamaly an'i jhoan manuel
Daniel hourcade dia hoy izy:
Tsy mamelona ny Apple Watch izy io, misy boribory mena miseho miaraka amin'ilay marika! (mena koa) eo afovoany sy ambanin'ireto manaraka ireto: http://www.apple.com/help/watch
Valiny tamin'i Daniel Hourcade
Rodrigo rapela dia hoy izy:
salama amiko mijanona amin'ny maody fiaramanidina aho ary tsy mamela ahy hanao na inona na inona, satria tsy mifandray ... afaka manampy ahy ve ny olona sa mila mandeha any amin'ny fivarotana paoma aho? Misaotra anao
Valiny tamin'i Rodrigo Rapela
carlos irazoqui dia hoy izy:
ry namako, nikatona ny famantaranandroko paoma, tsy mamela ahy hanery ny famerenana indray, satria tsindrio ny bokotra 10 mandritra ny 2 segondra, ary tsy misy na inona na inona,
Ampiasaiko amin'ny maody fiaramanidina foana izy io, ary rehefa te-hampiditra azy aho dia tsy nilanja?
ampio raha azon'izy ireo atao
misaotra mamihina lehibe
Mamaly an'i carlos irazoqui
Tsy nahazo fampandrenesana nandritra ny roa andro aho. Ny Alarobia dia nivadika tampoka tamin'ny mitataovovonana (nandritry ny telo taona vao voalohany no nanaovany azy), napetrako ho tompon'andraikitra ary toa tsy maninona; saingy tsy mampifandray ahy amin'ny iPhone izy io, milaza fa mifandray izy io nefa tsy manokatra ny rindranasa ary tsy hitako koa ny fampiasana ny famantaranandro amin'ny iphone, toy ny hoe tsy takatra ireo fitaovana roa ireo.
ny ahy dia maty tampoka foana ary tsy nikitika azy, tsy haiko ny antony
Lourdes dia hoy izy:
Salama tsara tolak'andro, be loatra ny fanandramana tsy fahombiazana hita eo amin'ny efijery ny Apple Watch tsy miova, avereno famerenana ny famantaranandro ary ampifanaraho avy eo. Fa tsy mamaly ahy zavatra hafa izy
Valiny tamin'i Lourdes
Gustavo Boronat dia hoy izy:
Nohavaozina tao amin'ny IWatch 3 ka hatramin'ny version 5 aho ary lasa monochrome ny efijery
Valiny tamin'i Gustavo Boronat
tonny dia hoy izy:
Ny famantaranandroko aple dia andiany 1 ary rehefa alefako rehefa afaka kelikely dia milaza amiko fa fanandramana maro tsy nahomby ny mampifandray indray, ary nampifandraisiko im-betsaka izany ary niverina indray izany.
Mamaly an'i Tonny
Tsy afaka mihetsika aho, matetika, ny menio fampandrenesana ary ny menio bateria. Fantatrao ve ny antony mahatonga izany?
Toy izany koa no mitranga amiko, manana vaovao aho, efa nentiko tany amin'ny serivisy teknikan'ny Apple, nanao ny andrana nandritra ny adiny roa tamin'ny iPhone iray hafa izy ireo ary milamina ny zava-drehetra, mitranga amiko indray mandeha isan'andro isan'andro izany ary Tsy mbola nanana vahaolana aho, efa nomena vahaolana ve ianao?
Salama tsara ry andro.
Ampiasako amin'ny famantaranandro ny filomanosana, tamin'ity herinandro ity tampoka tamin'ny fomba filomanosana maimaim-poana, dia hitako fa rehefa manondro ny metatra fa milomano tampoka ianao dia nametraka vola be 200000 10 metatra, tamin'ny 0 minitra dia nojereko indray izany ary tsy intsony. Tsy nanondro na inona na inona izany, 0 metatra tsotra fotsiny na lava, saingy mahaliana izany satria rehefa tapitrao ny session na amin'ny iphone na amin'ny famantaranandro iray raha toa ka manondro azy tsara izany, mety hisy hilaza amiko izay mety hitranga sy ny vahaolana.
ALE339 dia hoy izy:
ny epijery fijeriko andiany 3 dia misy efijery mainty saingy manana bateria feno izy. Mahatsiaro ho mangovitra aho rehefa mampiditra hafatra fa tsy mahita na inona na inona aho
Valiny amin'ny ALE339
Salama, ny famantaranandroko dia tsy misoratra anarana. Tsy misy dingana, tahan'ny fo na zavatra hafa. Avy eo dia ataony daholo ny zava-drehetra. Namerina namerina azy io aho, namafa azy ary izay rehetra hitako tamin'ny internet. Azafady mba mila fanampiana amin'izany aho. MISAOTRA
Manana AW SE vaovao iray volana lasa izay aho, tonga tamiko izany fa rehefa te-hiditra amin'ny fampandrenesana sy ny foibe fanaraha-maso aho dia tsy afaka miditra ao, satria tsy afaka mandefa ilay efijery amin'ny rantsan-tànako na hidina aho, dia toy ny hoe nikatona ny efijery, mandeha tsara ny sisa rehetra, na dia miorin-koditra hijerena fonosana hafa aza aho dia milamina ny zava-drehetra, misosa miakatra sy midina fotsiny aho, izany dia indray mandeha isan'andro ary efa nentiko tamin'ny serivisy nahazo alalana tamin'ny paoma fa tsy nahita lesoka izy ireo, mandà ny tsy hamerenako isan'andro aho mba hanamboarana azy. Ampianaro azafady.
Ny Apple Watch Series 3 tsy hivadika. Ary mahita tsipika fotsy ambonin'ny famantaranandro ianao
Mamaha ny olan'ny matematika amin'ny fakan-tsarinao toy ny any El Hormiguero
Lavabit: "Raha mandresy ny FBI dia afaka mandositra an'i Etazonia ireo orinasa"